X3: Nhaka yaFarnham, Iye Zvino Inowanikwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
X3: Nhaka yaFarnham mutambo wevhidhiyo uyo unowanikwa paHumble Store, GOG uye zvakare Valve's Steam yeLinux. Zvakare, iwe ikozvino une zvimwe zvigadziriso zvepuratifomu iyi. Egosoft yakazivisa kuburitswa kwemahara kweiyi DLC, ndiko kuti, yemahara yekurodha zvemukati zveiyi zita rakaburitswa muna Kubvumbi gore rino.
X3: Nhaka yaFarnham yakaiswa mumakore ekupedzisira eX3: Albion Prelude, uye inotanga mu zvakasiyana zvakanyanya kubva kumitambo yapfuura mune yakateedzana X3. Asi, chero zvakadaro, ichafadza vanoda vesainzi fungidziro, mahipi uye mitambo yemavhidhiyo yakaiswa muchadenga.
Yakave yakagadziridzwa pamusoro pemakore mashanu nenhengo dze Nharaunda yeEgosoft uye mukubatana padhuze naEgosoft pachayo. Mhedzisiro yacho haina chainopomerwa, kwete chete iyo nyowani nyowani uye nyaya yakasarudzika, iri zvakare iri yemukati kwazvo yemahara kuwedzera kwakamboburitswa.
Pakati pe chii chitsva muX3: Nhaka yaFarnham Ndizvo:
(Zvinenge) Zvese kubva kuX3: Kurwisana kweTerran uye X3: Albion Prelude.
Scouting maturusi uye scouts boka.
Dhipatimendi uye hukama hwakasimba.
Nyowani inotakura nendege yedrones uye ngarava dzekutakura nhumbi.
Vatambi dzimbahwe nezvivakwa zvitsva zvemberi.
Ngarava itsva yakasarudzika uye yakasarudzika.
Chiteshi chekuvaka masevhisi uye kuronga kwakaomarara.
Inotumira browser uye encyclopedia ine ma hyperlink.
Kutsva kutsva uye Gameplay sarudzo.
Chaicho chikamu chivakwa.
Yakavandudzwa matanda uye mifananidzo.
Yakagadziridzwa modding rutsigiro.
Zvakawanda, zvakawanda zvidiki kugadzirisa!
Pamwe nekusunungurwa kweLinux, Egosoft akagadziridzwa zvakare zvimwe zvikamu zveiyo X3 dzakateedzana:
X3: Terran Kurwisana
[GOG Linux chete] Yakagadziridzwa kuita shanduro 3.4 (2017).
[Steam chete] Yakareruka setup yekutanga muWindows.
Lib kuenderana nyaya dzakatarwa paLinux.
Yakagadziriswa akasiyana masampuli ezwi mune yechiGerman vhezheni.
X3: Yekutanga yeAlbio:
[GOG Linux chete] Yakagadziridzwa kuita shanduro 3.3 (2017).
Pasina kupokana, rutsigiro rwemazuva mazhinji urwo Egosoft nenharaunda varikuwana mazita avo zvinoshamisa zvechokwadi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » X3: Nhaka yaFarnham, ikozvino inowanika kuLinux
DXVK 1.9.1 inouya nekugadzirisa mabhugi, kugadzirisa mashandiro uye nezvimwe